Iyo Apple Watch Series 6 ine ruvara nyowani uye nekukurumidza kuchaja | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch Series 6 ine ruvara nyowani uye nekukurumidza kuchaja
Kudonha kweminiti yekupedzisira kazhinji ndiko kwakanaka uye mune ino kesi tine imwe inoti isu tichaona a Apple Watch Series 6 ine mivara mitsva uye izvo zvakare zvinowirirana nekukurumidza kuchaja, inonzi "Kurumidza Kubhadharisa".
Zviripachena kuti kudonha kweminiti yekupedzisira kunogona kujekesa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, asi mune iyi nyaya L0vetodream yakatwasuka mukudonha kwayo uye hairatidzi mufananidzo mumwe chete. Iyo inongoratidzira ma tweets matatu akateedzana umo inoti: kutsanya kuchaja (pasina kudoma mudziyo asi inofanirwa kunge iri wachi), mutsva weApple Watch (iyi kana iwe uchidudza) uye inowanikwa munaGunyana 15.
Nenzira yakananga iyi kubheja kwe leaker / s avo vaive nezvakawanda zvavo uye minuses mazuva mashoma apfuura naJon Prosser. Ehe, iyi account ingangove isinganyanyo kuzivikanwa kupfuura yaMark Gurman, asi zvaakafungidzira zvinowanzove chaizvo chaizvo, zvakanangana uye zvakajeka.
Izvo zvinoita sezviri pachena ndezvekuti isu tichaona mutsva mutsva paApple's Apple Watch Series 6 mangwana. Uye izvo zvinoita sekunowedzera kujekesa ndezvekuti isu hatisi kuzoona iyo nyowani iPhone 12 modhi, zvirinani ndizvo zviri kutaurwa pamambure mumaawa ekupedzisira pamberi pehurukuro yaApple kuApple Park. Tichaona zvese izvi zvichirarama kubva ini ndinobva kuMac uye nemagariro edu, uye senguva dzose isu tichagovana kufukidzwa nehanzvadzi yedu webhusaiti Actualidadiphone.com
Gadzirira popcorn uye soda izvo munguva pfupi iri kuuya show inotanga!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 6 ine ruvara nyowani uye nekukurumidza kuchaja
Manage mafaera, maforodha, zviito uye zvimwe zvakawanda paMac yako neDropzone